I-MTV 'Ngaba Nguwe Lowo?' Isiphelo seXesha lesi-3: URyan Devlin Udliwanondlebe, Phinda ubuye - Itv
Eyona Itv Ii-MTV's 'Nguwe wedwa?' Umgcini kaRyan Devlin Dishes kwiFinale's 'Jaw-Dropping'
Ii-MTV's 'Nguwe wedwa?' Umgcini kaRyan Devlin Dishes kwiFinale's 'Jaw-Dropping'
Umgcini weRyan Devlin kunye nabadlali ngexesha lomsitho ofanayo. (Ifoto: MTV)
QAPHELA: Imidlalo emithathu egqibeleleyo yexesha idweliswe ekupheleni kweli nqaku
Isizini ephelileyo, uMbonisi wonwabile kumdlalo weqonga Ngaba Unguye? ngelixa usebenza ngaxeshanye ngokwezibalo ukufumana umlinganiso ogqibeleleyo. Sebenzisa amaqhinga afanayo nalawo umntu anokusebenzisa ukudlala umdlalo webhodi Umkhondo, phakathi Baye bakwazi ukusombulula umboniso njengepuzzle yelogic kwaye upapashe imidlalo echanekileyo kuphela kwiiveki ezisibhozo kuluhlu lweeveki ezili-10.
Kule sizini, sizamile ukusombulula imidlalo kwakhona, kodwa besingenalo ithamsanqa. Nabani na obekhe wabukela unokuqikelela ukuba kutheni: i-cast ibisoyikeka kakhulu ekuqondeni imidlalo ngokwabo ukuba akukho lwazi lufumanekayo kuthi, isenza ukuba kube yimathematika ukuba singakwazi ukufumanisa ngaphambi kokutyhila okukhulu.
Ngelixa siphoxekile asinako ukusombulula umboniso ngeli xesha lonyaka, kukho umntu omnye okhathazekileyo kunaye nawuphi na umbukeli: umamkeli uRyan Devlin.
Sincokole noMnumzana Devlin malunga neemvakalelo zakhe malunga neli xesha lonyaka, indlela iMTV egqiba ngayo umdlalo ofanelekileyo, ukubakho kwexesha kunye nabalinganiswa besini kunye nesiphelo sonyaka.
Bapakishe ibali elininzi ekugqibeleni. Izakuphambana, utshilo, kunzima ukubamba nokudlulisa ukothuka kwakhe. Ndizakuba kuTwitter ukuphendula imibuzo. Zilungiselele ubuhlanya. Le nto igqiba ngathi ... umhlathi wakho… kukuhla kwemihlathi indlela le nto idibana ngayo. Zizibhonkers.
Nantsi enye incoko yethu:
Uhlala kwiscreen kuphela ngexesha lomceli mngeni, izindlu zenyaniso kunye nemibhiyozo efanayo. Wenza ntoni ixesha eliseleyo? Ngaba uhlala namalungu endlu konke konke?
Andidibani nabalingisi konke konke kuba sizama ukubavumela benze into yabo, kodwa ndibandakanyeka kakhulu emva kwezigcawu. Yonke imihla, ndibaneentlanganiso zabavelisi apho sithetha ngento eyenzekileyo. Ndidinga ukuziswa ngokukhawuleza kwinto eyehlayo ukuze ndisebenze ngendlela endijongana ngayo nabadlali kwixesha elizayo xa ndibabona. Ndikwasebenza nombhali kwizinto zokubhala, ke ulwimi lwemihla kunye neepun eziziziyatha esiza nazo ngamagama omceli mngeni. Ndidubula into yonke imihla, nangona. Ndinayo neminye imisebenzi. Ndivelisa umboniso kwi-GSN kwaye ndingumseki-mbumba wenkampani yegranola bar ebizwa ngokuba Le Bar isindisa ubomi , ke awusoze ubekhona umzuzu otyhafileyo. Ndinaye umntwana nosapho lwam phaya.
‘Indlela abadlala ngayo ngoku, bafanele ukuphulukana nayo. Andizukuziva kakubi ukuba benza njalo kuba bazizisela bona. '
Leliphi ixesha elilelona ulithandayo ukuza kuthi ga ngoku?
Ngumbuzo onzima lowo, kwaye ngokwenyani kufana nokuzama ukukhetha umntwana wakho omthandayo. Isamente yahluke kakhulu kwaye amava ahluke kakhulu. Ndinendawo ethambileyo entliziyweni yam yexesha lokuqala kuba yayiyeyokuqala. Babengenalo nofifi lokuba le fomathi iza ntoni, ngoko ke kwakumangalisa kakhulu ukuba babedlalela elona bhaso likhulu lemali kwimbali yeMTV- $ 1 yezigidi. Kwaye kwakungekho ngqiqweni evela kubalingisi ukuba bayayazi indlela yokudlala le nkqubo kuba khange babone umboniso ngaphambili. SasinoEthan noAmber ababefaniswe njengomdlalo ogqibeleleyo emva koko baqhubeka nokutshata, kwaye ngoku banomntwana. Yinto nje ezoyikekayo ebinako ukuza kuvela kumboniso.
Ixesha lesibini yayiyindawo ekhatywayo ye-crazier enobudlova obuninzi, idrama kunye ne-hookups. Kwaye kwisizini yesithathu, zezona zinemvukelo. Bacinga ukuba bayifumene, bacinga ukuba bangayidlala kwaye bayawa nje ebusweni ngoku, kwaye yinxalenye yezithandwa zam nazo. Ndijonge kubo kwaye ndicinge, ‘nina nizizidenge.’ Baza kuya kwisiqendu sethoba kwaye banemidlalo emithathu egqibeleleyo kwiveki ephelileyo.
Kwaye abanalo nofifi lokuba ngoobani umdlalo. Abazi nto (wavuma). Ndiyazi ukuba uyayazi into eyenzekayo, kodwa kufuneka ndinyanisekile; ukuba baphela befumana yonke imidlalo, ndingothuka kwaye ndiza kubuza ukuba kusemthethweni na. Bakude kakhulu, kuya kuziva ngathi kuphume umoya obhityileyo.
Ngokucacileyo, ndiyazi, kodwa ndizibuyisela kweli nqanaba kuthotho, ndicinga into efanayo ngqo nawe. Okokuqala, indlela abadlala ngayo ngoku, kufanelekile ukuba baphulukane nayo. Andizukuziva kakubi ukuba bayakwenza oko kuba bazizisela bona. Okwesibini kuko konke, ukuba nangasiphi na isizathu, bayakwazi ukukuqonda oku, andazi ukuba ndiza kulunga na kuloo nto, kuba izakuvakala ngathi ayivelanga ndawo kwaye izakuva ngathi ibiyiyo Bekufanelekile. Yimeko engaqhelekanga kuba uxhasa bona. Andiyazi imidlalo engenayo kwaye ndiyayifumana nabo kwaye ndihlala ndifuna ukuba bayiqonde. Sele bebethwa ngombane kwaye ndifana nje, 'izakuthatha ntoni?' Banokubethwa kabini kwaye akukho ngaphaya kobukumkani obunokwenzeka-kubonakala ngathi kufutshane nokudubula. Yile nto siyaziyo ukuza kuthi ga ngoku. Ixesha elidlulileyo, singathatha ulwazi kwiinyani zenyani kunye nokucinywa kwamnyama ukufumana okungaphezulu kwento eyazisiweyo. Hayi ngeli xesha lonyaka. (Ifoto: MTV)
Ndiqaphele ukuba bekukho umdlalo weqonga ongakumbi kule sizini. Ngaba i-MTV yenziwa ngenjongo ngenjongo yokuba kubekho umdlalo weTV ngakumbi?
Ndiyavuma ukuba kukho umdlalo weqonga ongakumbi, kodwa andiqondi ukuba siyilahlile. Ndihleli ekwenziweni, kwaye impumelelo yomboniso ivela entliziyweni. Ewe, abantu bayayithanda idrama kwaye kulula ukuthetha ngayo, kodwa kakhulu, into esiyibonileyo evela kubalandeli kukuba bazijongile kweso sikrini. Bajonge ezabo iingxaki zokuthandana, kwaye bazimisele aba bantu, nokuba bayavuya kwidrama. Ugxininiso ekuziseni abafana abali-10 kunye namantombazana ali-10 ayinyani ngokugqibeleleyo anamandla ngokwenene. Kwenzeka nje ukuba xa uzisa abantu abangama-20 endlwini, kuyakubakho ukungqubana kobuntu, ukhuphiswano, umona kunye nokubuyela umva, kwaye yinto yendalo le uyibonayo kwilizwe lokwenyani. Kwenzeka nje ukuba baphantsi koxinzelelo olukhulu, ke yonke into iyaphakama.
Umsebenzi wokuphosa wenza njani ucinga ukuba ufuna ukufumana abantu abangama-20 ofuna ukuba nabo kumdlalo ohambelana ngokugqibeleleyo?
Yiphuli enkulu ukuqala ngayo. Rhoqo ixesha lonyaka sifumana izicelo ezingakumbi nangakumbi. Kukho iiparameter, kunjalo-iminyaka yobudala, kufuneka ungatshatanga, kufuneka uncancise ukuthandana. Kukho uvavanyo lobuntu olukhulu, amaphepha emibuzo, udliwanondlebe noochwephesha bengqondo kunye nabadibanisi abaziingcali. Kukho udliwanondlebe nabahlobo, usapho kunye ne ex zabo. Kukho udliwanondlebe oluninzi ngaphezulu kwe-Skype kwaye buqu kwi-LA. Ngokwenyani simbe ukuze sifumanise ukuba ngaba bajonge ngokwenyani ukufumana umdlalo wabo okanye bafuna ukuba yinkwenkwezi yeTV. Kwaye sinokuxela ngokwenyani emva kwazo zonke iimvavanyo, ke sinendawo entsha yokubona kwaye ngubani ohambelana ngokugqibeleleyo.
Umsitho wokutshatisa weveki ephelileyo uye washushu emva kokuba uTyler enqume ukungamkhethi uKiki, eqinisekisa ukuba abanakuphumelela kule veki. (Iscreenrgrab: MTV)
Ngaba i-MTV ingakuthathela ingqalelo ukwenza ixesha apho abakhuphiswano bengalunganga bonke? Ngaba yinguqulelo yesini okanye yesini?
Ndingayibukela kwaye ndiyamkele ngokuqinisekileyo. Baninzi abantu phandlapha abafuna uthando. Kwaye kukho imingeni yokuphosa nantoni na, kodwa ndicinga ukuba iyakuba yinto entle. Ke ewe, ixesha lesine okanye ujikeleze-ndingathanda ukuyibona. Ndiyazi ukuba bekuxoxiwe malunga noku kwaye andazi ukuba bakuphi, kodwa ndiza kuhlala phantsi nabavelisi kungekudala malunga nexesha lesine kwaye ndiza kuyizisa kwakhona.
Ukholelwa kangakanani ngokobuqu kwinkqubo yokwenza umdlalo we-MTV? Ngaba ucinga ukuba ufumana abantu abafanayo ngokugqibeleleyo kungekuphela komboniso, kodwa kubomi bokwenyani?
Ndiyavuma. Ndicinga ukuba isebenza ixesha elininzi. Akukho ndlela akukho nto inokusebenza ngayo iipesenti ezili-100 zexesha okanye oku kuya kuba yinto eyinyani kwaye siya kutshintsha umhlaba, kodwa ndicinga ukuba isebenza ngamanye amaxesha, kwaye oko kungcono kunokuba kusebenzela aba bantu ngoku. Ukuba bavule iintliziyo neengqondo zabo, ndicinga ukuba bangothuka xa bebona ukuba iyinyani kangakanani le midlalo. Kwaye ngamanye amaxesha abantu bafumana uthando abangangafanelani ncam, kwaye ngubani okhathalayo? Ekupheleni kosuku, ukuba bayalufumana uthando kwaye kwenzeka ukuba siphazame, naloo mpumelelo. Yifoto ende xa uzama ukwenza iTV entle kwaye utshintshe ubomi babantu, kodwa sikwazile ukukwenza oko.
Xa abantu befumana into ekhethekileyo nomntu ongadibaniyo nayo, isebenza kakuhle kangakanani le nkqubo? Ingaba oku kuwenza nzima kangakanani umdlalo?
Injalo kanye into enokwenzeka ngokwenyani. Xa uthabatheka ngumntu ongakulungelanga wena, ayisiyi kuphazamisa nje ubudlelwane bakho, kumdlalo wethu, uphazamisa wonke umntu.
Abalingisi basebenzisa iikomityi zeSolo ukuzama ukulinganisa umdlalo kule ndawo ukusukela esiphelweni senxalenye ezimbini zangokuhlwanje. (Iscreengrab: MTV)
Isizini ephelileyo, ndiye ndafumanisa ukuba kwiiveki phambi komdlalo wokugqibela ndisebenzisa izibalo ezilula. Yintoni emisa abo bakumboniso ukuba benze okufanayo?
Okokuqala, ndiyavuyisana nawe. Oko kuhle kakhulu. Bayifumene ngengqondo indoda uAnthony ngokwenene eqala ukucinga ngayo kwaye evula izinto. Ke xa uqhubeka, ungaqala ukusebenzisa iinyani zenyani kunye nokucinywa kwamnyama ukuze uncede ukukhaba amathuba. Nangona kunjalo, abanalo isibonelelo sento osenokuba ubunayo, oko kukuthi, ukuba akukho enye into, usiba, iphepha kunye nekhompyuter. Yonke into abayenzayo kufuneka yenziwe kunye, ngokuvakalayo, kwiintloko zabo. Abanazo ipeni, amaphepha, iikhompyutha okanye iifowuni endlwini. Akukho iigridi kunokuba zinokutsalwa, kwaye akukho nto imbi kumabonakude kunokubukela abantu besenza ingxaki yezibalo. Kodwa, kukho iindlela ezibonakalayo zokwenza. Siyibonile no-Anthony kwaye ekugqibeleni baqala ukuzama ukuyilungisa ngokudlala ngathi, 'uhlala apha. uhleli apha ’kwaye usebenzisa iimodeli ezincinci ezinje ngeebhotile zeshampu kunye neekomityi zeSolo, kwaye bazakuzijikeleza ukuze bazame ukuqonda Kwaye ukusebenzisa isicwangciso-qhinga nje, ubuncinci ngeli xesha lonyaka, kungqineke kungoyisile. Kubangele ukuba bamnyama baphulukane ne- $ 250,000, kwaye ukuya kwiveki yesithoba, eyona nto bayenzileyo yimidlalo emithathu egqibeleleyo. Kodwa ukuba ungaqala ukufumana umdlalo wakho ngokwendalo kwaye mhlawumbi ubandakanye isicwangciso, ndicinga ukuba ungazikhaba izinto ezingathandekiyo.
Uvuselelwe nje ixesha lesine. Yintoni esinokuyilindela? Ngaba kuya kubakho ukujija?
Sivuya kakhulu, kwaye ndiyaqikelela ukuba impendulo emfutshane kukuba andikazi okwangoku. Siyaphosa, kwaye into endiyaziyo kukuba i-MTV iyayithanda kakhulu indlela ehamba ngayo. Sine-twist encinci kule sizini kunye nabo yokuphulukana nemali ukuba baphume mnyama. Kwaye yintoni eyenziweyo yayikukunceda ukukhuthaza abadlali ukuba babancede bagcine iintliziyo zabo njengezinto ekugxilwe kuzo. Ukuba ulapha ngesizathu esifanelekileyo kwaye ufuna uthando, ungahamba nge-1 yezigidi. Kodwa ukuba uzama ukudlala umdlalo wenkqubo okanye ngenjongo yokumnyama ukuze ukwazi ukufumana inyani enkulu, iya kukuhlawula. Ke ndicinga ukuba xa sibona i-twist entsha okanye i-twist eyongezelelweyo, ndicinga ukuba iyakuba semgceni wale-into eza kubagcina endleleni. Ngalo lonke ixesha lonyaka elivelisayo, umdlalo olandelayo unethuba.
Olu dliwanondlebe luhlelelwe ubude kunye nokucaca.
Ixesha lesithathu elifanelekileyo lomdlalo
UChelsey kunye noConner
I-Britni kunye ne-Austin
UCheyenne kunye noTyler
Stacey kunye noNelson
UFabio, uMargarine Champ wexesha elide, ugqitha isithsaba esiya kwiSpokeshunk eNtsha
Uphengululo 'lweOrville' kunye neenkcukacha zoMsasazo oBukhoma
LD16 ukubala: Zwicker Khokela ngaphezulu kukaSimon ukuya kuthi ga kuma-67
mdala kangakanani udella reese
ukuba ungathi lusuku oluhle lwesikhumbuzo
Iklabhu yokucheba yeharry vs.
Ixesha le-hamilton lokubaleka idisney kunye
ezona zixhobo zokutsha zityebileyo